YouTube Music yatove nechikumbiro cheApple Watch | Ndinobva mac
YouTube Music yatove nechikumbiro cheApple Watch
Kana zvangoita sekunge Google yawana iyo zita chairo remumhanzi wako wekushambadzira sevhisi, YouTube Music, zvinoita kunge hofori yekutsvaga yatanga kuwedzera mamwe emabasa akapihwa nemamwe masevhisi emimhanzi paApple Watch kwenguva yakareba.
Yazvino yekuvandudza yeYouTube app yeIOS, inosanganisira shamwari yeApple Watch, chishandiso chinotibvumidza isu kuti tigadzirise kuburitswa kwechikumbiro, bvunza raibhurari ... iri kure kutonga kwechishandiso chakaiswa pane iyo iPhone, muchidimbu.
Iyo YouTube Music app yeApple Watch inosanganisira kuumbana kunogona kuwedzerwa kutarisa kumeso, kunyange isingaenderane nezvose. Inosanganisirawo nzira pfupi inobvumira vashandisi kutumira izvo zvirimo zviri kutamba zvakananga kune smart speaker. Parizvino, hazvitibvumidze kunakidzwa nemumhanzi tisingafanirwe kuutora kare mumamodeli ane kubatana kweLTE.
Kuti tishandise iyi vhezheni yeApple Watch, chishandiso chedu chinofanirwa kutarisirwa neWatchOS 6 zvichienda mberi, saka zvinowirirana chete kubva kuApple Watch Series 6. Rimwe rematambudziko atinosangana nawo nekushandisa, kana isu tisiri vanyori vebasa, ndeyekuti iko kushanda hakuna kukosha zvachose.
YouTube Music inotibvumidza kuridza chero rwiyo rwunowanikwa mune yayo yakakura katarogu kunze kwekutiratidza vhidhiyo, asi zvinongotitendera kuti tidaro nechidzitiro chakabviswa kana tikabhadhara kunyorera. Kana zvisiri, isu tinofanirwa kugara takavharidzira yedu terminal.
Zvinoshamisira kuti, zvakare, Google yakavhura vhezheni ye smartwatches yeimwe yeanoshandisa, mune ino YouTube Music, yeApple Tarisa pamberi peWearOS, chishandiso icho chingazotora mwedzi mishoma kuti usvike kune Android ecosystem.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » YouTube Music yatove nechikumbiro cheApple Watch
iyo App Store yatove nekutsigira kuchengeterwa kwekushandisa nyowani kusvika mazuva zana nemakumi masere zvisati zvaitika
Iko kutendeuka kweSony kamera kuti ishandiswe seWebcam maMacs